Desander Factory | Mpanamboatra Desander China, mpamatsy
Ny desander SD50 dia ampiasaina amin'ny fanazavàna ny fotaka ao anaty lavaka. Tsy mampihena ny vidin'ny fanamboarana fotsiny izany fa mampihena ny fandotoana ny tontolo iainana, izay fitaovana ilaina amin'ny fananganana sivily.
SD100 desander dia sombin-tsarimihetsika fandavahana ary natao hampisaraka ny fasika amin'ny tsiranoka fandavahana. Ny moka matevina izay tsy afaka esorin'ny shakers dia afaka esoriny. Ny desander dia napetraka taloha fa aorian'ny shakers sy degasser. Fampitomboana ny fahafaha-misaraka ao amin'ny ampahany fasika sandoka bentonite manohana ny asa grad ho an'ny fantsom-panafody sy rindrin'ny diaphragm.
SD-200 Desander dia milina fanadiovana fotaka ary novolavolaina ho an'ny fotaka amin'ny rindrina ampiasaina amin'ny fananganana, injenieran'ny fananganana tetezana, injeniera amin'ny tonelina ambanin'ny tany ary fananganana injeniera tsy mihady. Izy io dia afaka mifehy tsara ny kalitaon'ny slurry amin'ny fotaka fananganana, misaraka amin'ny vongan-tsiranoka amin'ny fotaka, manatsara ny taham-porean'ny fananganana fotony, mampihena ny habetsaky ny bentonite ary mampihena ny vidin'ny fanaovana slurry. Izy io dia afaka mahatsapa ny fitaterana ny tontolo iainana sy ny famoahana ny fako maloto ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fananganana fiarovana ny tontolo iainana.
Sinovo dia mpanamboatra sy mpamatsy entana any China. Ny mpila anay SD250 dia ampiasaina amin'ny fanazavana ny fotaka ao anaty lavaka.
SD500 desander dia afaka mampihena ny vidin'ny fananganana, mampihena ny fahalotoan'ny tontolo iainana ary mampitombo ny fahombiazany. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fananganana fototra. Izy io dia afaka mampitombo ny fahafaha-misaraka ao amin'ny bentonite kely fasika, manohana ny asa vita amin'ny fantsona.